छोरोले आमा लाई प्रे,मीको साथ यस्तो अवस्थामा देखेपछि… भयाे यस्तो घ/टना ! – Dailny NpNews
छोरोले आमा लाई प्रे,मीको साथ यस्तो अवस्थामा देखेपछि… भयाे यस्तो घ/टना !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २७, २०७८ समय: २२:५२:३२
काठमाडौँ । जवान छोराले आमालाई आफ्नो प्रेमीका साथ देखेकै कारण ज्या/न गुमाउनु परेको छ । होस्टलमा बस्दै आएका जेठो छोरा छुट्टीमा घर आएका थिए ।एक दिन छोरा बाहिर गएको बेलामा आमाले प्रेमीलाई बोलाइन् । तर जेठो छोरा समय भन्दा पहिले घर फर्किए ।
उनले आमालाई प्रेमीसंग आ/प/त्ती/जनक अवस्थामा देखे । स/म्बन्ध खुल्ने ड/रले प्रेमीसंग मिलेर आमाले नै छोराको ज्या/न लिइन् । घटना भारतको हो ।श्रीमान् दिल्लीमा काम गर्थे र श्रीमती घरमै उनको पाँच बर्षे छोराको साथ एक्लै बस्दै आएकी थिइन् । जेठो छोरा भने होस्टलमा बस्दै आएका थिए । महिला बिहारको गोपालगंजमा बस्ने गर्थिन ।
ल/कडाउनको समयमा होस्टलवाट घर आएका छोराले आमाको बारेमा थाहा पाए । उनले आमालाई त्यस्तो नगर्नु भनेर सम्झाए । तर आमाले छोराको कुरा सुन्नुभन्दा पनि उनलाई नै ह/टाउने उपाय सोचिन् ।एकाएक छोरा हराए । उनको खोजी थालियो । प्र/हरीकहाँ आमा नै छोरा खोजी गर्न भन्दै निवेदन लिएर गइन् ।
भारतीय मिडिया डेली ह/ण्ट/मा छापिएको समाचार अनुसार १२ बर्षे किशोर मनीष कुमार हराएका थिए ।
प्र/हरी महिलाको घरमा पुग्दा छोरा हराएकोमा निकै दुखी बनेको नाटक गरिरहेकी थिइन् । मनिषकी आमा धर्मशीला देवीले छोराको अवस्था पत्ता लगाउन प्रहरीसंग अनुरोध पनि गरिन् ।
आमाले गरेको यस्तो ब्यवहारवाट कसैले पनि कल्पना पनि गर्न सकेनन् की घटनाको पछाडी आमा नै कारण हुन् । उनले छोरा हराउनुमा आफन्त माथि शंका लागेको भन्दै प्र/हरीमा निवेदन दिएकी थिइन् ।तर अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले वास्तविकता पत्ता लगायो । प्रहरीले आमाका प्रेमी र आमालाई पक्राउ गरेको छ ।